Raysul Wasaare Cabdi Weli Iyo Nicholas Kay Oo Kulan Ku Yeeshay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay Ergayga gaarka ah ee Q.M u qaabilsan arimaha Soomaaliya, waxaana ay ka wada hadleen xiriirka adage ee u dhexeeya Q.M iyo Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa uga mahadnaqay Danjire Kay taageerada joogtada ah ee Q.M ee ku aadan dib u dhiska dalka, waxaana uu xusay in uu rajaynayo in ay sii xoogaysataan dhamaan dadaaladda lagu samatabixinayo dalka Soomaaliya. Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Ergayga gaarka ah ee Q.M ee Soomaaliya waxaa kaloo ay ka wada hadleen soo magacaabidda Golaha Wasiiradda, qorshaha Hiigsiga cusub iyo sida ay dawladdu uga go’antahayu diyaar garowga doorashooyin dhacaya 2016.
“Xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo Q.M waa mid soo jireen ah. waxaan soo dhoweynaynaa taageeradda ay Q.M u fidiso Soomaaliya, waxaa jiri doona shaqo balaaraan oo na dhaxmari doonta sanadkan, gaar ahaan qorshaha Nabadda, Amaanka iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya ” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
Labada dhinac waxyaabaha ay ka wada hadleen waxaa kamid ah sidii loo balaarin lahaa howlgallada Amniga ee lagula dagaalamayo Al-Shabaab kadib markii dhowaan uu Golaha Amaanka ee Q.M ansixiyay kordhinta ciidamada Amisom iyo taageeradda ku wajahan qalabka ay u baahan yihiin ciidanka Soomaaliyeed. Kay waxaa uu la qaybsaday Ra’iisul Wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed tacsida dadkii ay dhibaatadu ka soo gaartay isku daygii weerarkii Jaziira Hotel.
“Ciidanka Soomaaliyeed oo kaashanaya Amisom waxaa ay sii xoojin doonaan howlgaladda lagu qaadayo goobaha dib looga xoraynayo Al-Shabaab sanadkan cusub” ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Cabdiweli isagoo uga mahadnaqay Danjire Kay taageerada iyo gacanta ay ka gaysanayaan howlgaladdan.